5 Halis oo ay leeyihiin Daawooyinka la isku caddeeyo & Cudurro waaweyn oo ay keenaan - Aayaha
Aayaha editorOctober 3, 2018
Inaad bedeshid ama caddeysid midabkii Ilaahey (SWT) ku siiyay ma wanaagsana mar walba, iyadoo iminka ay sii badanayaan dumarka iscadeeya ee isticmaala daawooyinka halista ah ee caafimaadka u daran.
Waxaan idiin soo gudbineynaa qataraha caafimaad ee ay u keenaan bini’aadamka daawooyinka la isku caddeeyo.
Caddeynta jirkaaga indhoole kaama dhigi karto, si kastaba in kareemanka aad isticmaaleysid ay gaaraan indhahaaga waa halis, caafimaad darro oo sababeysa indho la’aan, sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyay arrintaas ayaa waxaa sababya maado lagu magacaabo “hydroquinone” oo halis ah oo laga sameeyo kareemankaas.
Dhiig kar iyo Neef
Waxay u egtahay mid aanan macquul ahayn, balse waa macquul, jirka waa uu dhuuqaa waxyaabaha aad marisid, waxyaabahaas waxaa kamid ah kiimikooyin halis ah oo laga sameeyo daawooyinka la isku caddeeyo, marka oo jirka uu dhuuqa kareemankaas oo dhiigga ay ku darmaan, qaar kamid ah waxay saameeyaan wadnaha, oo ah wakiilka koowaad ee jirka taasina waxay sii keeneysaa cudurka Neefta iyo sare u kac ku yimaada dhiigga.
Sida laga soo xigtay qubaro, intabadan kareemanka laga sameeyo daawooyinka la isku cadeeyo waxaa ku jira maado kiimiko ah oo lagu magacaaabo “mercury” taasoo ah mid aad u halis badan waxayna qubarada sheegeen inay sababto xanuunada dhimirka ah.
Shirkad Kanada laga leeyahay ayaa baaris ay sameeysay ku sheegtay in maadooyinka aadka u sareysa ee hydroquinone mercury eek u jira intabadan daawooyinka la isku caddeeyo ay sababaan cudurka macaanka, sidaa darteed marka aad daawooyinkaan isticmaashid muddo dheer isla markaana jirkaaga uu dhuuqo oo ay ku darmaan dhiiggaaga waxaad qatar ugu jirtaa cudurka macaanka iyo dhibaatooyin kale.
Kelyaha oo shaqo gaba
Isticmaalka daawooyinka la isku caddeeyo muddo dheer waxay dhaawacaan shabakadaha jirka kuwaas oo loogu talagalay inay difaacaan, haddii aad si wadidna waxay haleeyeneynayaan awoodda jirka uu iskaga difaaci lahaa cudurrada, taasoo sababeysaa inay kusoo wajahdo xaalad caafimaad darro oo aad u liidata, sida in kelyaha ay howlgabaan iyo wax lamid ah.
Wax Ka Ogoow Alarjiga Halista Ah (Anaphylaxis)
Ogoow Waxyaabaha Keena Xasaasiyadda oo si fududna iskaga daweey
3 Faa’ido Caafimaad Ah Oo Laga Helo Caano Qumbaha
Afartaan Waxyaabood Sameey Marka Aad Hurdi Weysid Habeenkii